Baydhabo: Maamulka Oo Codsi u Direy Dhallinyarada – Goobjoog News
Baydhabo: Maamulka Oo Codsi u Direy Dhallinyarada
Maamulka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa dhallinyarada ku dhaqan magaaladaasi ka dalbadey iney kala shaqeeyaan amniga guud ee magaalada.
Guddoomiyaha Baydhaba C/laahi Cali Maxamed oo maanta oo Khamiis ah saxaafadda kula hadlay Baydhabo ayaa sheegay in dhallinyarada ay yihiin kuwa kaliya ee ka shaqeyn kara nabadda.
Waxa uu tilmaamay in ka maamul ahaan ay ugu baaqayaan in dhallinyarada ay la shaqeeyaan ciidamada Booliiska si loo helo amni ay dadka oo dhan ku wada seexdaan.
“Dhallinyarada ku dhaqan magaalada Baydhabo waxaan ka codsaneynaa iney la shaqeeyaan ciidamada ammaanka, dhallinti waa kuwa kaliya ee nabadda ka shaqeyn kara, haddii ay Booliiska la shaqeeyaan waxaan hubnaa in amniga uu wax badan iska bedalayo” ayuu yiri guddoomiyaha.
Arrintana ayaa imaaneysa xilli dhowaan heegan buuxa la geliyey ciidanka maamulka K/galbeed kadib markii taliska Booliiska uu sheegay in deegaannada maamulkaasi ka arrimiyo ay Al-shabaab qorsheeyeen iney ka fuliyaan falal amniga ka dhan ah.
Farmaajo Oo Soomaaliya Ka Bilaabaya Qaaraan Qaran
Keetoc sowphn prices of cialis printable cialis coupon
Vmjxvh gurify buy generic cialis online cialis price costco
Zcouim tblvha Cialis for order online pharmacy
Vkfytk bgycao canada pharmacy Sevzz
where can you buy hydroxychloroquine https://chloroquine1st....
When I was thirsty for information due to the lack of specia...